आजको राशिफल : मिति २०७५ साल भदौ १३ गते तृतिया तिथि बुधबार, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
आजको राशिफल : मिति २०७५ साल भदौ १३ गते तृतिया तिथि बुधबार
आजको राशिफल, मिति २०७५ साल भदौ १३ गते तृतिया तिथि बुधबार । ईश्वी सन् २०१८ अगष्ट २९ तारिख
मेष राशि हुने व्यक्तिले प्रभाव, नियन्त्रण तपाईले कन्ट्रोलमा हुनेछ। प्रभावशाली तरिकाले तपाईले समस्यालाई समाधान गर्न सक्नुहुनेछ। सकारात्मक सोचले बताइलाई प्रगतिको पथमा लैजाला ।
वृष राशि हुने व्यक्तिको इच्छा, आशा र सपनाले तपाईको मनोकांक्षा भविष्यमा सत्यसाबित हुनेछ। तपाईले खुसीका साथ त्यसलाई सुल्झाउने प्रयास गर्नुभयो भने सफलता प्राप्त हुनेछ। आफ्नो मुड परिवर्तन गर्नका लागि सामाजिक कार्यमा मन लगाउनुहोस्। आजको दिनमा मेसिनको खराबीले तपाईलाई नोक्सान पुर्याउन सक्छ, सोच विचार गरेरमात्र अगाडि बढ्नुहोला।
कर्कट राशि हुने व्यक्तिलाई आज भाग्यले साथ दिने हुँनाले व्यापार व्यावसायमा थोरै समय लगानी गर्दापनि प्रशस्त आम्दानि गर्न सकिनेछ । लामो दुरिको अध्ययन यात्रा हुँनेछ भने धार्मिक स्थल तथा मन्दिर तिर गई मनलाई शान्त पार्न सकिनेछ ।
सिंह राशि हुने व्यक्तिका लागि व्यापारमा उधारो लगेर नतिर्नेहरु हाबि हुँनेछन् भने आम्दानि नहुँनाले दैनिकी प्रभावित हुँनेछ । माया प्रेममा तित्तता आउँने तथा दाम्पत्य जीवनमा एक अर्कालाई शंकाको दृष्टिले हेर्नाले घरमा समस्या उत्पन्न हुँनेछ । समय र परिस्थितिको राम्र्रो सँग अध्ययन गरेर मात्र कुनै काम गर्नुहोला काम बिग्रन सक्छ । सावधान राहनुहोला।
तुला राशि हुनेहरुका व्यक्तिले आज तपाईलाई जुन समस्याले सताएको छ, त्यसलाई होसियार, चतुरताका साथ सुल्झाउन सक्नुहुनेछ। लागि आजको दिन उर्जावान रहेको छ। आजको दिनबाट सुरु गरेका काममा आर्थिक लाभ प्राप्त हुनेछ। आज परिवारका कुनै समस्यको स्वास्थ्यले मानसिक समस्या दिन सक्नेछ। कार्यक्षेत्रमा उन्नती तथा बाधाहरु मेहनत गरेर हटाउनु पर्नेछ।
धनु राशि हुने व्यक्तिलाई आज शारीरिक तथा मानसिक थकानो महशुस गर्नु पर्नेछ, थोरै आराम र पौष्टिक आहारले तपाईको उर्जा स्तर बढाउनेछ। आज तपाईको उपलब्धिले परिवारका सदस्य उत्सहित हुनेछन्। दोस्राmे व्यक्तिका सामु आफूलाई आदर्श स्थापित गर्नका लागि आफैलाई राम्रो बनाउने प्रयास गर्नुहोस्।
मिन राशि हुने व्यक्तिले आज पारिवारीक जीवनमा पर्याप्त समय र ध्यान दिनुहोस्। परिवारलाई यो कुराको महशुस गराउनुहोस् की तपाईले उनीहरुको बारेमा ध्यान दिनु भएको छ। जुन काम आफूले गर्नुभएको छ त्यसका श्रेय अरुलाई जान नदिनुहोस्। यदी कतै बाहिर जाने योजना बनाउनु भएको छ भने अन्तिम समयमा जान सक्नुहुनेछ।